Izigigaba manje ungathola indoda, ngangingakaze ekuphileni kwami ungazange wazama amazambane. sokudla okwehla esiphundu futhi unempilo kusukela kule impande lubonakala ngaso sonke isikhathi nsuku zonke iholide amatafula - amazambane abilisiwe wabhaka amazambane abondiwe, amazambane pancake, amazambane Zrazy njll Kusukela ezikhathini zasendulo, amazambane kubhekwa lwamaSlav isabelo isisekelo, isinkwa sesibili, nakuba ayivulanga eside kakhulu edlule.. Wakwenza amaNdiya, abomdabu mpumalanga yeNingizimu Melika, abahlala Andes ecishe ibe yizinkulungwane 8. Eminyakeni eminingi edlule.
Amazambane kukhona umkhiqizo okwelapha, iqukethe eziningi ama-carbohydrate, amaprotheni namafutha, kanye acid folic, i-calcium, magnesium nensimbi. amazambane Baked ku "umfaniswano" azigcina kakhulu zalezi izakhamzimba. amazambane amaprotheni aqukethe cishe wonke ama-amino acid ezitholakala izitshalo, kuhlanganise Irreplaceable. Ukudla 300 amagremu ngosuku amazambane abilisiwe, uyokwazi ukunikeza ngokugcwele emzimbeni wakho nge-phosphorus kanye potassium. 150 amagremu amazambane iqukethe mayelana 20 mg vitamin C, kodwa phezu nokunwetshiwe isitoreji lemali kancane kancane. Ulwazi oluqukethwe nezicubu amazambane akusho obungamcasula ulwelwesi lwamafinyila we emathunjini bese esiswini, ngakho abilisiwe amazambane nezitini izikhumba zabo edliwayo ngisho i exacerbation izilonda futhi kolwelwesi. Amazambane isitashi kunciphisa inani cholesterol serum igazi.
Emazweni amaningi, amazambane iwumkhiqizo osendaweni ezibalulekile futhi Irreplaceable wezokudla. Zikhona izindlela eziningi zisekelwe amazambane kanye nezindlela ukulungiselela. Yimiphi indlela ukupheka amazambane ukhetha, ngabe kungcono amazambane, wabhaka emkhonweni, pancake noma ecubuziwe evamile, khumbula ukuthi ukuthintana nge air amazambane mnyama futhi ilahlekelwa amavithamini yayo. Ukuvimbela Browning, nezilimo eziyizigaxa ehlutshiwe kungenziwa kafushane ukubeka ngamanzi abandayo. Ukupheka amazambane kufanele ibe esincane amanzi ukushisa ngokulinganisela ngaphansi lid ivaliwe, it is sibekwa amanzi abilayo kakade. Uma inhloso yakho iwukuthola ukuthi Fry amazambane ke ukukwenza cishe njalo uma kakhulu ukufuthelana uyithose pan.
Ukukhetha amazambane emakethe noma esitolo, sinake ukuminyana futhi ukubukeka. Nezilimo eziyizigaxa kumele abe umbala umfaniswano, inqubo okumelwe ingaphazamiseki futhi liqinile, ngaphandle imigodi namagquma. Ukuba khona "umgqomo oluhlaza" kubonisa isitoreji umkhiqizo ukukhanya futhi kuqukethwe ezifana ezinobuthi njengoba solanine. Ngenxa yokuthi i-amazambane kuvame wathenga nezixhobo ezinkulu, kubalulekile ukugcina ke. Amazambane kufanele agcinwe endaweni epholile, emnyama, kodwa hhayi ngokushesha ufike ukufake esiqandisini.
Uma ukhathele amazambane abondiwe njengoba main side dish, ukupheka amazambane nezitini ku emkhonweni. Ukuze wenze isidlo ukunambitheka ekhethekile kukwazi ukwakhiwa lihambisana namanye imikhiqizo, efana nokuzula amazambane wabhaka kungenziwa kuphekwe nge salmon. Ngenxa yalesi udinga amazambane nezilimo eziyizigaxa lemali ezine ezinkulu, 100 g oqoshiwe anyanisi oluhlaza, 100 g ukhilimu (10-15% fat), 70 ml ubisi yesikimu, 100 g ibhotela esithambile, 50 g we horseradish phusha usawoti, umhlabathi emnyama, 300 g ama-salmon ngibhema noma usawoti, 50 g we ushizi futhi abanye isikhathi esikhululekile.
I osuke usushisa kakade 200 ° C isidingo kuhhavini imizuzu 40-50 Bhaka wageza amazambane unpeeled. Nika kube cool kancane, futhi ngesipuni ukususa uginindela. Ngemva kwalokho, inyama amazambane exutshwa onion eluhlaza, ukhilimu omuncu, ubisi, ibhotela, horseradish tincetu oqoshiwe salmon umucu. A ingxube usawoti kanye pepper ukunambitha futhi azigcwalise amazambane ngokulinganayo phezu ngilale ushizi vukuza. Ngokulandelayo, wabhaka amazambane eyayigcwele kuhhavini imizuzu 15-20 ezingeni lokushisa 180 ° C.
Okwamanje, kunezinhlobo ezihlukahlukene eziningi ebanzi zokupheka for amazambane izitsha, futhi bonke abantu uzithola into angayithandi.